🥇 ▷ Taariikhaha sii deynta ee OnePlus 7T iyo 7T Pro mar labaad ayey socdaan ✅
Taariikhaha sii deynta ee OnePlus 7T iyo 7T Pro mar labaad ayey socdaan
OnePlus ayaa caado u ahayd, tan iyo qarnigii shanaad, taxanaheedii calannimo oo ku saleysan laba nooc, kuwaas oo udub dhexaadka u ah mobilada iyo Pro ay ku kala duwan yihiin. Shirkadda ayaa sidoo kale soo bandhigtay nooc saddexaad oo xitaa ka xoog badan taleefannadan ‘Pro’. Tani waxay ku daraysaa xarafka “T” magacyada, iyo tusaalooyin cad oo tan ah waa OnePlus 5T OnePlus 6T.
Isku mid ayaa ku dhici doona flagship OnePlus 7 iyo 7 Pro, in kastoo si sax ah aan sax ahayn. Soo saaraha Shiinaha wuxuu si dhakhso leh u ballaarin doonaa qoyskan taleefannada, laakiin daruuri ma ahan hal nooc oo dheeri ah, laakiin leh labo, waxay umuuqataa. Taasi waa, waxaan heleynaa a OnePlus 7T iyo OnePlus 7T Pro, iyo taariikhooyinkooda sii deynta ayaa mar kale la sifeeyay, markan si loo xaqiijiyo mid aan horeyba u ogaanay oo aan u muujinay kuwa kale suuqyo kala duwan.
Horumarkii ugu dambeeyay ee aan ka faalloodnay in OnePlus 7T Pro uu bilaabi doono Oktoobar 15-keedii, xuska kaliya ayaa loo sameeyay aaladdan, sidaa darteed NASA wuxuu ka bartay OnePlus 7T. Si kastaba ha noqotee, macluumaadka cusub, marka lagu daro xaqiijinta macluumaadkan, sidoo kale tafaasiishaas Moodeelkan ugu dambeeyay ee la magacaabay wuxuu ka imaan doonaa gacanta kii hore, isla taariikhdaas. Maalintaas wixii ka dambeeya, waxay u badan tahay in laga helo suuqa adduunka.
15ka Oktoobar iibka https://t.co/yKxDlzI1O3
– Max’ed J. (@Samsung_News_) Ogast 19, 2019
Laakiin arrimuhu way isbedelaan markii aan aadno Hindiya iyo Yurub / Mareykanka. Wadanka weyn ee Aasiya ayaa imaan doona goor hore, gaar ahaan bisha soo socota ee Sebtember 26intii uu ku sugnaa US UU. Qaarada Yurubna waa sameyn doonaan Oktoobar 10-keedii. Wadamada kale iyo gobolada waxay mudan yihiin taleefanada laga bilaabo taariikhda horey loo sheegay.
OnePlus 7 vs OnePlus 7 Pro: isbarbar dhig buuxa
Waana in la ogaadaa goorta Shiinaha la siin doono iyaga, maxaa yeelay suuqan badanaa kuma dhexmaro kuwa kale. OnePlus-ka cusub ayaa sidoo kale laga yaabaa in isna rasmi laga dhigo halkaas Oktoobar 15, laakiin tani waa wax aan xaqiijin karno.